Sambatra taona vaovao 2018 faniriana SMS - Lovesmsbd.com | New Bangla SMS
Home Unlabelled Sambatra taona vaovao 2018 faniriana SMS
Sambatra taona vaovao 2018 faniriana SMS
1.) Na dia ao amin'ny maizina indrindra ora eo amin'ny fiainanao, dia mijanona eto anilan'ny eo anilanao ihany no nihazona ny labozia sy ny fahazavana ny rehetra ny tsy nanazava faritra. Andriamanitra anie handro anareo amin'ny fahasambarana rehetra eto amin'izao tontolo izao! Sambatra ny taona vaovao 2018!
2.) Fanantenana tsara ireo faniriany hanampy anao mba hankalaza ny mahafinaritra sy ny majika ny taona vaovao. Maniry anao ho tena faly ny taona vaovao.
3.) Cheers ho an'ny Taom-baovao, izay antenaina ho feno tsara vintana sy ny fahasambarana. Tratry ny taona!
4.) Distance mba mitandrina antsika masina, fa ny fontsika no miara-. Happy Taona Vaovao ny fifaliana teo amin'ny fiainako!
5.) Enga anie ny taona vaovao ho feno famirapiratana sy ny fanantenana mba maizina sy alahelo hijanona lavitra anao. Tratry ny taona!
6.) Fanantenana ny ny taona vaovao feno fahombiazana, fahasalamana, fiadanana sy ny fahasambarana. Tratry ny taona!
7.) Enga anie ianao manana be be taona feno fifaliana sy ny vintana! Mijanòna salama tsara sy hanatratra ny fahombiazana lehibe kokoa havoana. Maniry anao tena tsara herintaona mialoha!
8.) izany ny taona vaovao sy ny fotoana tsara indrindra mba hanavao ny teny eo amin'ny fiainana. Esory ny teny toy ny fialonana, fankahalana, valifaty, ny fitiavan-karena avy amin'ny malagasy ka hanolo-teny toy ny fitiavana, fikarakarana, fangoraham-po, fanaovana ny marina sy ny fahafaham-po amin'ny fitoerany. Izany dia azo antoka fa manana lehibe sy malalaka ho meloka-taona mialoha.
9.) Ny fananana anao teo amin'ny fiainako Manome toky Aho noho ny olona miankina sy miantso ny amin'ny fotoana mahory. Rehefa amin'ity taona ity tsy maintsy ho farany, hitantsika ny taona iray hafa fandaminana eo amin'ny fiainantsika manome antsika fahafahana iray hafa ho eo ho an'ny tsirairay. Tratry ny taona!
10.) Misy be dia be ny zavatra eo amin'izao tontolo izao mbola tsy hita sy za-draharaha. Velona ny fiainanao, hijery faravodilanitra vaovao, handeha ho niainany vaovao izany ny taona vaovao, ary tsy hanenina ianao izany.
11.) Izany dia ny hampita hafatra avy amin'ny fo ny fiarahabana ho anao sy ny fianakavianao. Manantena nanana taona lehibe sy hanana na dia tsara kokoa indray amin'ity indray mitoraka ity. Hiaraka amin'ny olona akaiky sy malalany. Ankafizo!
12.) marika iray hafa taona vaovao eto dia recharge ny hery sy mahazo napetraka mankafy. Miala ny fanahiana, ahiahy sy tahotra, ary manaraka ny politika fotsiny ny mihomehy, ny fitiavana, velona.
13.) dia 2018 fotsiny manodidina amin'ny zorony, hitandrina izany ao an-tsaina fa velona indray mandeha ihany, ny fiainana dia fohy, fitsipika dia natao ho tapatapaka sy manana fahatsiarovana mahafinaritra sy famoronana no zava-dehibe rehetra.
14.) Io Taom-baovao ho anao ny faniriako dia ny andro izay manahirana maimaim-poana,-tsaina izay enta-mavesatra sy ny fitiavana maimaim-poana izay toe-javatra maimaim-poana.
15.) Andeha hanao ny Taona Vaovao fanapahan-kevitra ny ho any ho an'ny tsirairay ary manampy mpiara-olombelona izay mila fanampiana isika na dia tsy mahafantatra azy ireo manokana. Koa aoka ho avy ny nampiely ny sasany hatsaram-panahy sy matokia!
16.) Enga anie ny masoandro vaovao ny Taona Vaovao hitondra anao hery sy ny fahavitrihan'ny raha tsinam-bolana ny taona vaovao mitondra anao fiadanana sy filaminana!
17.) Fanantenana tsara rehetra ankehitriny ao amin'ny ny taona vaovao manompo ho toy ny harena sarobidy ho tsara kokoa rahampitso. Ankafizo ny Taom-baovao.
18.) Nandritra ny taona maro teo aloha, ary efa bugged Nahasorena ny helo avy aminao. Androany, tamin'ny fiandohan'ny taona vaovao tiako mampanantena anareo aho fa handeha hanohy hanao izany amin'ity taona ity ihany koa. Mirary soa amin'izany!
19.) Na dia ny taona vaovao sy ny zavatra mety hiova, manantena aho ny hanohy ny fiaraha-miasa sy hitandrina ny amin'izany fatorana izany mahomby ny taona maro ho avy. Maniry lehibe ianao taom-baovao!
20.) Taona maro tonga ka mandehana, fa tamin'ity taona ity aho, maniry anao manokana avo roa heny ny levitra ny fahasalamana sy fahasambarana nofaranan'ny paikady tamin'ny rehetra be fitiavana. Tratry ny taona!
21.) Knock Knock! Izaho no Taom-baovao ary izaho eto amin 'ny fitiavana, fifaliana, fitahiana sy harena tsara ho anao. Aoka aho ao amin'ny sandriny mivelatra.
22.) Taona ho avy, ka mandehana, fa ny namana haharitra ny androm-piainany ary tsy ho fahavalony Ho. Noho izany, mbola maty ny masoandro mahazo harosony eny, maniry anao aho ho sambatra sy mahafinaritra ny taona vaovao.
23.) Rehefa miditra avy tamin'ny taon-dasa, ary midira ho amin'ity taona ity, no anirahako anao faniriana avy amin'ny fo feno fitiavana, vintana, fahasambarana sy fifaliana. Tratry ny taona!
24.) manantena fa ny fahoriana rehetra sy ny fanaintainana haharitra afa-tsy raha mbola ny fanapahan-kevitra ny taona vaovao. Tratry ny taona!
25.) Misy unbolted varavarana iray miandry anareo amin'ny korontam-bato ny fahafahana eo amin'ny lafiny iray koa. Hihazona ireo taona vaovao ity, ary manana mahomby taona ho avy.
26.) Enga anie Andriamanitra handro anao amin'ny 12 volana ny fahasambarana, 52 herinandro ny fifaliana, 365 andro ny zava-bita, 8760 ora ny tsara vintana, 52600 minitra ny fahasalamana tsara sy ny fampiasana azy 31536000 segondra sy ny fahasambarana! Tratry ny taona!
27.) Io Taom-baovao aho no mandinika ny banky izay mitranga mba hanome ahy be findramam-bola, ary avy eo manadino ahy mandrakizay. Aza ampahafantaro ahy raha mahita iray! Happy btw ny taona vaovao!
28.) Toy ny tontolo manodidina antsika manontolo mitombo be taona iray taona, Manantena aho fa manana fo izay sisa toy ny tanora sy falifaly toy ny mahazatra.
29.) Mety ny taona vaovao ity dia tsy maintsy ilay manatanteraka ny nofy rehetra, ka manomboka izany amin'ny fifaliana sy mihetsiketsika fanahy! Ity maniry anao manankarena taona vaovao!
30.) Te hampitsahatra ny ratsy rehetra propensities ho an'ny taona ho avy ka; Na izany aza dia nahatakatra fa tsy misy olona tia ny resy.
31) Enga anie ny segondra, minitra, ora, andro, herinandro sy volana ity Taona Vaovao hitondra anareo fifaliana sy vintana be! Tratry ny taona!
32.) Tokony hisaotra an'Andriamanitra noho ny fanokafana indray pejy vaovao eo amin'ny fiainantsika. Manantena ny hiaina fotoana tsirairay ny fahafenoana.
33) Indro ny fanomezam-pitiavana, nofonosiny amim-pitandremana, mifamatotra amin'ny finoana tsara sy ny nasiana tombo-kase tamin'ny faniriany avy amin'ny fo. Tratry ny taona!
34.) Enga anie isan'andro ny taona atsy ho atsy hitondra fahasambarana, fientanentanana sy mamy tsy ampoizina eo amin'ny tokonam-baravarana! Maniry anao sy ny olona rehetra malala ny mahafinaritra ny taona vaovao.
35) manadino ny fanaintainana, alahelo sy tsy fahombiazana tamin'ny taon-dasa. Mandray amin'ity taona ity amin'ny marina sy be tsiky. Tratry ny taona!
36.) Ny Taom-baovao dia tonga lafatra fotoana namelabelatra faravodilanitra vaovao sy ny nofy rehetra tonga saina. Indray ny tanjaka sy herim-po izay mitoetra ao anatinareo, ary manohy mandroso.
37) Enga anie ianao ka ho nitso-drano ity taona vaovao
amin'ny fiadanana anaty, tena fitiavana sy ny fifaliana unconditioned!
38.) Ny Taom-baovao, dia jery todika ny mafana fahatsiarovana rehetra, mirehareha amin'ny zava-bita, ary maka lesona avy amin'ny fahadisoana teo aloha. Efa taona iray feno tsy misy farany sy ny laugher mahafinaritra.
39) Talohan'ny ny fiposahan'ny masoandro ny masoandro voalohany tamin'ny 2018, dia aoka ahy nandoko ny tara Dia fitahiana avy amin'ny fahombiazana sy fifaliana ho anao. Ity maniry anao tena tsara ny taona vaovao!
40.) Rehefa miditra ity Taona Vaovao miaraka, dia aoka ny mampanantena ny ho eo foana ny tsirairay ary hitsangana ambonin'ny lavo rehetra sy ny toetra izy ireo. Tratry ny taona!
41.) Raha eo amin'ny lalana mankany amin'ny fahombiazana, ny fitsipika manan-danja indrindra dia ny foana nony nandroso ary tsy miherika. Enga anie ianao ka hahatratra ny tanjonao dia manana mendrika!
42) Amin'izany Taom-baovao, andao hanao teny fikasana ho tena. Ny fampanantenana mba ho tsara kokoa olombelona, olona tsara kokoa ny fianakaviana, ary tena zava-dehibe ho an'ny olom-pirenena tsara kokoa ny firenentsika.
43.) Nights dia maizina ny andro fa dia mamirapiratra, tandremo ny loha sy ny fo amin'ny fitoerana marina. Aza malahelo tahaka ny efa ho akaiky. Eny! Isika miresaka momba ny ho avy ny taona vaovao.
44.) Ny faniriana tsara ho anao dia tsy voafetra fotsiny ho an'ny taona manaraka fa ho maro taona ho avy. Manana ny hanozongozona, NW ny taona vaovao!
45.) 2017 mivoaka ... ny taona vaovao 2018 ho avy! Ve ny manova indray kosa ny anjara sy mandihy nandritra ny alina manontolo. Maniry anao tanteraka 365 andro mahafinaritra sy ny fifaliana.
46.) Raha toa ianao ka faly, mankalaza ity Taona Vaovao miaraka amin'ny tsiky eo amin'ny tavanao. Raha tsy faly, mbola manao toy izany mba hahatonga ny olona akaiky sy malalany mitsiky ny taona vaovao ity.
47.) Misy zavatra izay sisa Ringana na ny zavatra sisa unsaid? Inona anefa no tsy azo sisa ringana no maniry anao ho sambatra ny taona vaovao.
48.) Aoka ianao ho faly ianao afaka mahita ny taona vaovao indray eo amin'ny fiainanao. Mianara avy amin'ny lasa kileman-toetra sy handray izao tontolo izao amin'ny avo fanahy!
49) Te anao tena sambatra ny taona vaovao! Mankalaza ny andro miaraka amin'ny olon-tiany sy ny peratra ao amin'ny Taom-baovao tamin'ny maro-pifaliana!
50) Enga anie Andriamanitra handro ianao sy ny olona rehetra malala ny fitiavana, vintana sy ny fahasambarana eto an-tany! Firariantsoa tsara indrindra sy vanim-potoana miarahaba ny Taom-baovao avy ahy ho atỳ aminareo.
51) Tamin'ny fotoana fankalazana izany, antenaiko fa manana mahafinaritra Janoary, fiadanana Febroary, mahafinaritra Martsa, mahafinaritra Aprily, adin-tsaina-maimaim-poana May, faly Jona, sambatra Jolay, nitso-drano Aogositra, Septambra mahafinaritra, fety Oktobra, tsara Novambra ary farany ny sambatra indrindra Desambra! Ary farany nefa tsy ny kely indrindra amin'ny rehetra, dia manana ny tena mahafinaritra sy mahafatifaty ny taona vaovao.
Taom-baovao sy SMS Messages
taona vaovao sy ny SMS Messages
52.) Na dia isaky ny masoandro mody ny miala amin'ny fiainantsika isan'andro, isan-fiposahan'ny masoandro mitondra miaraka aminy ny andro vaovao feno fanantenana sy fahafahana ho antsika ihany. Hampiasa ny andro tsirairay ho an'ny feno hery anaty.
53) Tsy misy afaka hiverina amin'ny andro ho hanova ny iray na ny fahadisoana ny fahadisoany. Koa nitsahatra nieritreritra ny lasa, miasa eo amin'ny fanomezana ho an'i hanao hoavy mamiratra.
54) ianao ho tsara kokoa amin'ny fotoana, jereo lasa demotivating rehetra mahatonga ny fiainanao sy ny miezaka ho avy.
55) Hahazoanao ny Loka ireo elany sy Manidina avo ny vaovao! Hiroborobo sy hivelatra ny fara ny taona vaovao ity.
56) Aoka hisy fifaliana ao an-tokantrano sy ny hatsaram-panahy ao am-ponao. Rehefa manakaiky ny Taom-baovao, ny fanantenana dia mitondra teny soa mahafaly miaraka sy tia ho anao!
57.) Toy ny Taom-baovao mahita ny lalana amin'ny alalan'ny alina ny oram-panala ririnina, eto no naniraka anareo ho mafana Miarahaba sy namihina mafy! Tratry ny taona!
58) Hianao no mpanonofy,
ary ianao mpankatò.
Enga anie ianao hanao sy hanatratra zava-bitany lehibe kokoa,
amin'ny fahiny, isan-taona.
Ny tsara indrindra ho an'ny ny taona vaovao.
59) hamoronana ireny tantara lehibe indrindra izay azo atao ho anao. Sokafy ny boky vaovao iray taona vaovao ary manomboka manoratra!
60) Enga anie ny andro izay mifoha ianao, eo imason'ny eo amin'ny fitaratra ianao, ary faly kosa faly na iza na iza ianareo no mihaona! Aelezo fahasambarana sy hampifaly ny taona vaovao ity!
61) Raha vao nazava ratsy ny Taom-baovao manakaiky, dia mampanantena anao ho tsara kokoa sy manatanteraka rahampitso.
62) manadino ny fijaliana 'ny taon-dasa ary miandrandra ilay falifaly foana ny zavatra miandry anao.
63.) Cheers ny Taom-baovao miakatra! Manana iray mahafinaritra!
64.) ny taona vaovao dia tsy hoe fotsiny mikasika ny fanovàna ny daty fa ny tari-dalana rehetra. Enga anie ny taona ho feno fifaliana sy ny gaiety.
65) Enga anie ny ratsy fotoana nitondra ny tara-panantenana ity taona vaovao.
66.) Enga anie ny taona vaovao hitondra amin'ny fanantenana vaovao, vaovao sy ny fanapahan-kevitra vaovao fahasambarana.
67) Rehefa mifarana ny taona, dia enga anie negativity rehetra sy ny zava-tsarotra koa mifarana; Mety hampiditra ny Taom-baovao ao ihany izay tsara rehetra.
68) Enga anie isan'andro ny Taona Vaovao hitondra anao mahafinaritra tsy ampoizina tahaka ny curled felany ny voninkazo izay namelatra hanitra ankasitrahana moramora araka ny mandeha eny sosona ny sosona.
69) Enga anie ny taona vaovao hitondra ny lalanao plethora ny fahafahana izay mamela anao manenona fahombiazana tantara.
70.) Rehefa mitombo izao tontolo izao ny taona iray hafa be taona tiako ianao hanana fo izay mbola tanora sady falifaly foana Taona Vaovao sy.
71.) ny faniriako ho anao dia tsy voafetra ho amin'ny teny taona fa ny rehetra ny rehetra ny taona izay anao, eto amin'ity fiainana ity sy any an-dafin'i. Manana mitranga ny taona vaovao ho avy.
72) Io Taom-baovao rehetra anie ianao manaisotra ny tahotra, ahiahy sy ahiahy rehefa manao toerana ho an'ny nofy, hetaheta sy ny fifaliana.
73.) Toy ny tamin'ity taona ity dia nampirina entana ny kitapo, Enga anie ho aminareo fa ny tena tafahoatra sy ny fahoriana koa ny manao toy izany koa, ary ny Taom-baovao mitondra zava-bitany sy ny vokatra notsiriritiny fatratra ho anareo.
74.) ny taona vaovao isika rehetra manonofy ny tontolo iray tsara kokoa ho antsika sy ny antsika. Izany Taona aoka isika hitondra ny onus mba hanao izao tontolo izao ho toerana tsara kokoa ho anao, dia izaho sy ny olon-drehetra.
75.) Io Taom-baovao Ho aminareo anie ny hery mamerina manoratra ny tantara eo amin'ny fiainanao ny fomba tianao izany ho.
76.) Io Taom-baovao aoka tsy ny alahelo sy ny fampitahorana tsirambina ny fahazavana sy ny positivity, fa ity farany herim-panahy izay hanampy hitondra amin'ny masoandro ho amin'ny fiainanao.
Ny taona vaovao Message
77.) Tadidio fa tsy misy ny taona vaovao dia afaka ny ho tonga lafatra. Fa ianao kosa tokony tsy hiraharaha ny ratsy ka mitampisaka amin'ny tsara.
78.) Io Taom-baovao anie ianao mitsoraka ao amin'ny fanahy sy ny mamorona mandrakizay namany tenanao.
79) Enga anie andro voaloham-taona ho fankalazana aminareo manodidina ireo izay miahy.
80.) Io Taom-baovao tiako ianao hanana saina misokatra ho anareo tsy fantatrao izay kely tsy ampoizina ny fiainana mety hanipy ny lalanao.
81.) Io Taom-baovao Manantena aho fa ny dingana tsirairay no maka dia tarihin'ny ireo fitahiana 'Andriamanitra.
82.) Tsy misy afaka ny ho Taona fandriana ny raozy. Fa tiako anao herim-po sy fahatokiana mba hiverina ho sakana tsirairay fahafahana mandritra ny ho avy ny taona vaovao.
83.) Enga anie ny taona vaovao ho Mamiratra toy ny masoandro, ary ho toy ny voninkazo manitra.
84.) Enga anie ny nofy rehetra avy amin'ny tamin'ny herintaona kosa ho zava-bita nandritra ny taona vaovao ity.
85.) Io Taom-baovao rehefa diabe mankany hanatanteraka ny nofy rehetra mba ho tonga manan-tahotra ao amin'ny fomba hanakanana ny lalana.
86.) Enga anie ny taona taloha hanaisotra ny alahelo sy fahoriana araka ny mandalo sy hameno ny andro ho avy amin'ny tara-masoandro sy ny fahasambarana ankehitriny sy mandrakizay.
87.) Io Taom-baovao anie ianao hahita be fitiavana nefa hentitra tanana ny finamanana sy ny fiarahana isaky ny haninjitra ny anao.
88.) ny tena fahombiazana avy raha tsy ireo izay vonona ho azy. Koa na oviana na oviana indray dingana izany sy mba hananana herim-po hanaiky olana vaovao. Maniry anao ho faly ny taona vaovao 2018.
89.) Aoka aho maniry anao ho faly ny taona vaovao teo anoloan'ny tsipika hatao hipoka telefaonina sy ny Internet nahantona. Sambatra ny taona vaovao 2018!
90.) Aoka isika hanana antoko Což izany fotoana Taom-baovao. Hankalaza ny Taona Vaovao 2018 Happy amiko mandritra ny alina, ka tsy afaka niara-hifarana ny taona ary manomboka ny taom-baovao miaraka.
Enga anie ny jiro ny fifaliana, hanazava ny fiainanao ary fenoy ny andro miaraka
amin'ny mamirapiratra sparkles ny fiadanana, fifaliana sy fankasitrahana. Happy Taona Vaovao ..................... taona vaovao sambatra hafatra ho an'ny namana
nifanena tamiko ny fitiavana, fahasalamana, fiadanana sy fifaliana,
Nila toerana iray hijanona maharitra.
Nomeko azy ireo adiresy Ora fanantenana tonga soa aman-tsara izy ireo.
Happy Taona Vaovao
ny zava-drehetra izay mitaona U,
ny zavatra rehetra izay midika indrindra 2 U,
ny zavatra rehetra izay mahatonga U mitsiky & mitondra fifaliana U ........................... taom-baovao sambatra ..best firariantsoa ho an'ny namana
te 4 U ao amin'ny taom-baovao.
Toy ny ravina 2017, Enga anie ho-maina avokoa ny alahelo sy ahiahy.
Rehefa tonga 2018, enga anie izany hitondra aminareo unadulterated fahasambarana sy fanambinana.
Enga anie ity taona vaovao Mitondra fahasambarana fotsiny tsy hamiravira
olona rehetra tia anareo ihany no malala,
rehetra ny zava-manahirana dia ho hamita
izany ho anao manokana aho Taona Vaovao faniriany .................... taom-baovao sambatra ........ hafatra
amin'izany sambatra taona vaovao.
Aoka isika ho tsara kokoa olombelona,
tsara kokoa aman-janaka,
ary ny kely indrindra ho olom-pirenena tsara kokoa tamin'ny 2018 ..
Andriamanitra veloma 2017!
Dil Mpanj gehrai se
Pholon K kaghaz isan-
HAPPY ny taona vaovao || taom-baovao msgs in hindi ||
Alina dia Dark Light fa ny andro,
ny alina dia Dark fa ny andro Light,
Mirary ny fiainanao foana Bright.
Noho izany malalako dia tsy mahazo Matahora
Což, Fanomezana Andriamanitra ho antsika "vaovao be taona".
zavatra sisa azo ravana
Misy teny azo sisa unsaid
Misy fihetseham-po mety ho sisa unexpressed
Fa olona toa anao dia tsy havela.
Enga anie ua Happy taona vaovao 2018 sambatra ................. taona vaovao hafatra ho an'ny ankizivavy
Sada barte rahe AAP Mpanj laza,
Aur kilaometatra be dia be ny mahafinaritra & masti.
Mirary anao a..Happy taona vaovao miaraka amin'ny
Be dia be ny fiadanana sy fanambinana .......................... taona vaovao sambatra msgs in hindi
Sabke dilo janvier ho an sabke liye Pyar,
no ummid ka sath aao bhulke såre hihy
taona vaovao 2018 Hum ko WEL-kare Fahazavana izany!
Es Naye Saal janvier ..
Jo mba chahe loza Tera ho,
Naya Saal Mubarok fotsiny ho an tuje Yaar.
Zavatra in ny tsikinao izay miteny ho Ahy,
zavatra ny feo izay mihira ho ahy,
Misy zavatra eo imasonao, izay manao amiko,
fa Hianao no amiko ny tiany indrindra.
Tratry ny taona !!
Mitohy toy ny Chocolate Cake marina amin'i Divay
Ny Taona Vaovao Tsy Ho anao tsy lavorary.
PLZ Aoka ho eto amiko eto ambonin'ny Taom-baovao io mandrakizay.
Tratry ny taona !! ........................ mahafatifaty taom-baovao ho an'ny ankizivavy SMS
Young fo izay R feno mahafaly, na oviana na oviana ny eritreritra Amin'ny fahoriana.
Ny ela mivoaka, fa ny faly Young tamin'ny taona 2018 Tonga Amin'ny hafaliana amin'ny rahampitso.
Ny alina farany niarahany Of 2017.
Dia IG Wish Very Happy hariva.
Wish koa U andro lehibe 2018
rehetra Upcoming taona tany Ora Life, feno fifaliana.
Enga anie ny taona vaovao
Ento ireo faniriana ho anareo rehetra
Hafanana ny fitiavana, fampiononana ny an-trano
Fifaliana ho an'ny zanakareo,
Company sy ny fanohanana ny fianakaviana N namana
be fiahiana fo izay manaiky
N mihevitra olombelona rehetra koa
karena ny fahalalana N
harena ny fahasamihafana
Herim-po hitady N hilaza ny marina
Na dia midika hoe mijoro irery
fanantenana N nofy ny marina tontolo N
ny faniriana hanao izany hitranga
dia fahazavana hitarika ny lalana
Manome tanana mba hanamafisana ny firaisan-tsaina
fiadanana N fiadanana ao an-tsainao,
Enga anie ny fanahy ity fialan-tsasatra
vanim-potoana hameno ny fonao fitiavana
fiadanana sy fahatoniana
te anao maro fa manantena izy
ny Advance ny taona vaovao!
aoka ny taona ho avy ho be voninahitra izay mamaly soa rehetra ho avy ezaka amin'ny fahombiazana
Enga anie sambatra fotoana sy mafana fahatsiarovana miramirana ny taona vaovao. Manana lehibe isan-taona. Tratry ny taona.
Sambatra taom-baovao mialoha ho U & Ora fianakaviana.
Tamin'ity taona ity wll U hitondra fanambinana,
Ankafizo ny fiainana kely evry
Sath kilaometatra apno se,
Rahmat kilaometatra RAB se,
Pyar kilaometatra Fahazavana se,
Raba se ke AAP khus rahe sabse ..
Sambatra ny taona vaovao !! .. sambatra ....................... taona vaovao tsara indrindra ho an'ny namana maniry
Ho Gaya 2017 Hatim!
Ataovy ny taona vaovao ny fipoahana ny mahafinaritra! Mankalaza ny vaovao tamin'ny voalohany
afomanga, ary miarahaba ny namana sy ny fianakaviana Ny alina nialoha ny taona vaovao 2018
Enga anie ka tsy iray mandatsa-mitete eo amin'ny takolakao ny taona vaovao ity.
Enga anie ianao ho fitahiana amin'ny fifaliana sy fahasambarana ny taona rehetra manodidina.
Hanjavona ny zava-drehetra thats ratsy, mandray ny zava-drehetra thats faniriana tsara ianao tena taom-baovao sambatra.
Aoka ny marika ny taona vaovao mahita anao fresher, sambatra kokoa, salama, falifaly kokoa, amim-pifaliana kokoa sy afa-po kokoa.
Ireto no maniry anao ho Sambatra Taona Vaovao ............................ sambatra taona vaovao tsara indrindra SMS
Esory ny fankahalana, Lust, fialonana, lolompo, fankahalana, fitiavam-bola avy amin'ny teny ity Taona Vaovao i Eva
, ary hanolo azy ireo amim-pitiavana, Fanoloran-tena, Support, fangoraham-po, fanaovana ny marina sy fahafaham-po,
Eto no maniry anao ho faly taona vaovao ...... ................. tsara indrindra maniry taona vaovao sambatra SMS
Enga anie ny fanahy 'ny vanim-potoana ny New taona mameno ny fonao amin'ny filaminana sy ny fiadanana. Maniry anao ho sambatra taona vaovao!
Enga anie ity taona vaovao ho dingana,
amin'ny fitarihana anao niainany vaovao,
New arabe mba hijery sy fahombiazana ho tonga vaovao!
Sambatra ny taona vaovao 2018 sambatra ................................ taona vaovao tsara indrindra SMS
Ndeha peratra ity taona vaovao ihany no zava-tsoa maniry anao ho sambatra taom-baovao.
Laxmi ka haath ho an
Sarswati ka saath ho an
Ganesh ka nivas ho an ...
Apake jivan lehibe Prakash
Hi Prakash ho an
"Sambatra taona vaovao" tsara indrindra ...................... sambatra taona vaovao SMS in Hindi
ny heartiest maniry nandritra ny taom-baovao lehibe.
Andriamanitra anie hitahy anao. Mirary anao ho faly ny taona vaovao sambatra .................................... taona vaovao tsara indrindra ho an'ny namana SMS
amin'ny hafanana 'ny fo, Enga anie ianao ho tsara tarehy sy mahafinaritra mahafinaritra Taona Vaovao.
Andriamanitra anie fanomezana anao ny fomba mba hiova ny nofy ho zava-misy ao amin'ity taona vaovao. Maniry anao ho faly taona vaovao.
Enga anie ianao dingana lehibe maro hita sy ny toerana amin'ity taona ity. Maniry tena taom-baovao sambatra.
Fifaliana, fahasambarana, fitiavana sy ny fahasalamana tsara izany rehetra izany tiako ho anareo izany taona vaovao. Maniry anao ho faly taona vaovao.
Fanantenana ny Taom-baovao mitondra entana ny fifaliana ho anao, Mirary anao Sambatra New Near sy ny tsara vintana.
Enga anie ny nofy rehetra ho tanteraka, ity taona vaovao. Maniry anao ho sambatra taom-baovao.
Nandritra ny taona ho avy dia mety ny fiainanao ho feno fankalazana ny Fahasambarana kely ...
maniry anao ho Bright, Sambatra sy miroborobo Taona Vaovao 2018 amin'Andriamanitra hitahy ..
Fenoy Ora fiainana amin'ny Fahasambarana & Bright kivy,
Ento ho U Fifaliana sy fanambinana ho an'ny Taona manontolo,
Ary ny ny Taom-baovao te 4u ry ...
Wish ua tena faly ny taona vaovao.
Tandremo ny tsiky
Ilaozy ny ranomaso,
mihazona ny mihomehy,
Ilaozy ny fanaintainana,
Eritrereto ny fifaliana,
Adinoy ny tahotra,
ho mahafaly andro anaovana, Což
izany taona vaovao! Sambatra taona vaovao 2018
taom-baovao SMS in, taona vaovao SMS ho an'ny ankizivavy, sambatra Taona Vaovao hafatra santionany, taona vaovao SMS 2018, taona vaovao ho an'ny namana maniry, sambatra Taona Vaovao hafatra amin'ny teny goujrati, taona vaovao hafatra 2017, taona vaovao sambatra mampihomehy hafatra